फेरी रोल्पा जादैछु - Nabaraj Budha Nabin Udasi
फेरी रोल्पा जादैछु
“चिन्छु।” धारो खोलिदिएपछि उनले मिची-मिची हातखुट्टा धुने प्रयत्न गरिन्। हातमा साबुन लगाउँदा साबुनको वास यसरी तानिन्, मानौं एउटा गँजडी जोडले गाँजा तानिरहेको छ।
“तिमीसँग १० लाख छ ?” सुत्नेबेलामा रमलाले यसरी सोधिन् मानौं, मेरोबारे केही थाहा छैन।
“तिमीलाई के लाग्छ?” रमला कड्किइन्, “अब पनि कोही सित्तैँमा शहीद हुन्छन्? २००७ साल, २०१७ साल, २०३६ साल, २०४६ सालपछि पनि मान्छेको चेत खुलेन होला त? १० लाख एउटा सिनो हो, हाम्रो समाज गिद्ध। फूलमाया पनि यही समाजमा छिन्। बुझेकाले त लुछेका छन् भने उनले किन छाड्ने ?”